Nnukwu Xbox Series X Nsogbu N'ikpeazụ Ezie na E3 2021 - Comp Comparison】
Akụkọ banyere El Cid - Oge 2
Emechara nnukwu okwu Xbox Series X na E3 2021
Ihe ngosi Xbox na Bethesda bụ oge dị mkpa ndị nwe Xbox Series X na ndị Xbox Series S ji ndidi na-eche. N'ime ogbako nkeji 90 juputara na ọkwa ọhụụ na-atọ ụtọ, Microsoft anaghị azaghachi na nkatọ kpụ ọkụ n'ọnụ a na-eduzi na ngwaike ọhụrụ ya, enweghị egwuregwu, kamakwa gosipụtara na ntinye ego ya na ijeri dollar na Bethesda na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ gbasara. ịkwụ ụgwọ na nnukwu
Nke ahụ bụ ahụ efe, ebe ndị nwe Xbox ga-enwerịrị ihe anyaụfụ na Sony's PS5, nke nyeferela egwuregwu ndị ọzọ kemgbe ụbọchị mbụ. Ọ bụ ezie na Microsoft nwere afọ ojuju iji gbakwunye ọnwa isii mbụ nke Xbox Series X na Xbox Series S na isiokwu ndị nwere mmelite, Sony ewepụtala egwuregwu PS5 n'ezie, dị ka Ratchet na Clank: A Rift Apart na Addictive Returnal. roguelike. Ma ọ nwere ihe na-abịa.
Ndị nwe Nintendo Switch nwekwara mmetụta kpamkpam emebi emebi n'oge afọ mbụ nke njikwa ahụ, na The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, na Xenoblade Ihe E Mere 2, ha niile na-ahụ na usoro ngwakọ ahụ rutere ezigbo mbido. - ịghara ịkọ akụkọ asịrị ugbu a nke onye na-anọchi 'Switch Pro' ka dọpụrụ uche ya na igwe Microsoft na Sony.
Na mberede, Otú ọ dị, atụmanya maka ihe ga-eme Xbox Series X na Xbox Series S na 2021 na afọ ndị na-abịanụ yiri ka ọ bara ụba, yana Xbox Game Pass dị ka ikike nke na-agba agba, nke ahụ mere Microsoft consoles ọhụrụ ka ọ bụrụ echiche. ọrụ. ndị egwuregwu.
Microsoft kwesịrị inweta otuto ọ bụghị naanị maka ijikọta ihe ngosi nke gosipụtara nnukwu hits dị ka Starfield na Halo Infinite, kamakwa maka ịgụnye ụdị aha dị iche iche dị iche iche. Site na aha otutu indie dika Dochie anya na nrịgoro, rue ọgba aghara nke Animals Party, ọ bụ ihe ngosi emere maka ndị mmadụ karịa ndị nwere igwe Microsoft.
Anyị hụkwara ihe ngwaike Xbox Series X nwere ike ịme, ihe ụfọdụ Fans na-ebe. Stalker 2 kwere nkwa ịbụ ihe ngosi eserese eserese maka sistemụ, Microsoft Flight Simulator yiri ka ọ na-adọrọ mmasị na Xbox dịka ọ dị na PC, na Forza Horizon 5 si bụrụ ihe ịtụnanya mara mma.
N'ihi ya, ọ bụ mmemme a na-akwụghị ụgwọ, yana ọtụtụ ịtụnanya maka ndị na-egwu egwuregwu, gụnyere ma na ọnweghị oke Xbox Obere ngwa ngwa ezumike na 2021.
(Ebe E Si Nweta Foto: Microsoft)
Mana ọ bụrụ na enwere otu ozi dị mkpa Microsoft jisiri ike gosipụta na ikpughe ọ bụla, ọ bụ nke a: Ọ ga-ara ara ịghara ịdebanye aha Xbox Game Pass. Kasị egwu, ọ bụrụ na igwu egwu na Xbox ma ọ bụ PC, ị na-emere onwe gị nsogbu site na ịdenye aha maka ọrụ ndenye aha Microsoft.
Ọ bụghị naanị na Microsoft agbakwunyela 10 egwuregwu Bethesda ọhụrụ na ọrụ ndenye aha a ma ama, na-egosipụta ọmarịcha Yakuza: Dị ka Dragọn, mana nke aha 30 gosipụtara n'oge Xbox na Bethesda Showcase, 27 n'ime ha ga-abịa Xbox Game Pass, ọtụtụ na-abata akpa usen. Atụmanya nke inwe ike igwu egwu egwuregwu ọ bụla ekwuputara na E3, maka ndenye aha kwa ọnwa, bụ anụbeghị afọ ole na ole gara aga. Ọbụna agaghị ekwe omume, mana ọ bụ eziokwu na Xbox.
Xbox Game Pass na-aga n'ihu ịkọwapụta ụlọ ọrụ egwuregwu na usoro nke nnyefe ọdịnaya na uru na-enweghị atụ. Mana ọ dị mfe ichefu na nke a bụ ọrụ mgbakwunye, nke anaghị egbochi gị ịzụta ụdị egwuregwu ma ọ bụ nke dijitalụ nke egwuregwu (ọ bụ ezie na ndị debanyere aha na-enweta ego 20% na egwuregwu ọ bụla dị na Xbox Game Pass). Ma dị ka Netflix na Spotify, ịdị mma ya na ike ya iji mee ka ndị debanyere aha mgbe niile bụ ebe ọ na-egosipụta ọdịnala na nke ochie nke ịzụrụ.
(Ebe E Si Nweta Foto: obere)
Ọ bụ ezie na ịnwere ike ichere ọnwa maka egwuregwu buru ibu na-esote ịmalite na nyiwe ndị ọzọ wee wepụta nnukwu ego mgbe ọ malitere, Xbox Game Pass ga-enye opekata mpe aha ama kwa ọnwa maka ndị debanyere aha site ugbu a ruo na njedebe nke. 2021.
N'ọnwa June, enwere Yakuza: Dị ka Dragọn, nnukwu mmelite na Oké Osimiri Ndị Ohi na Ọchịchịrị Ọchịchị. A ga-ewepụta Ascent na Flight Simulator na July, ebe Hades, Minit iri na abụọ na Psychonauts 2 ga-ahapụ na August. Sable ahụ dara oké ọnụ ga-abata na Septemba, yana site na Ọktọba ruo Disemba, ndị debanyere aha Xbox Game Pass nwere ike ịtụ anya na azụ 4. Ọbara, Forza Horizon. 5, Halo enweghi ngwụcha na ọtụtụ ndị ọzọ (kpọrọ ihe).
Yabụ na ọ bụ ọdịnaya zuru oke nke ndị egwuregwu nwere ike iji oge ha, na 2022 agaghị adị iche. Ndị debanyere aha ga-enweta Redfall, Contraband, Starfield, Somerville, Atomic Heart, Party Animals, Stalker 2, A Akụkọ Ọrịa: Requiem, Gbanyere na ndị ọzọ n'ụbọchị ọ bụla na-enweghị ego ọzọ, nyere ụlọ ọrụ na-adịbeghị anya maka mmepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịda mba.
Microsoft ekwuola na mbụ na ọ chọrọ ịhapụ aha nwe ụlọ kwa ọnwa atọ, ọ dịkwa ka ọ ga-ekwe omume n'ihi ọtụtụ ọmụmụ ya. Maka ụlọ ọrụ tụkwasịrị obi na usoro atọ gara aga, Gears, Halo, na Forza, nke a bụ mgbanwe dị ịrịba ama ma gosipụta na atụmatụ ogologo oge nke Microsoft bụ nke ziri ezi.
Ya mere Microsoft wepụrụ ya, mana ihe na-agba ume karị bụ ọnụọgụ egwuregwu ọ na-egosighi. Anyị ahụbeghị Avoué, Forza Motorsport, Fable, Perfect Dark, Hellblade 2, Everwild, ma ọ bụ The Elder Scrolls 6, nke pụtara na ọtụtụ ihe ga-abịa na Xbox Series X na Xbox Series S '. .
Ọ ga-abụrịrị usoro nrụzigharị ogologo oge iji rụkwaa mbibi nke mkpebi Microsoft maka Xbox One. Thelọ ọrụ ahụ mere nzọ iji mee Xbox One a multimedia ngwaọrụ mbụ karịa ihe egwuregwu egwuregwu a raara nye, ma hapụ ya pọtụfoliyo nke ọmụmụ ikike. belatara ruo n’isi nke aka ekpe. Ugbu a, agbanyeghị, mkpụrụ nke mkpụrụ ndị ahụ Microsoft kụrụ afọ ole na ole gara aga na-amalite ifuru, ọ bụkwa ndị egwuregwu ga-aghọrọ ụgwọ ọrụ.
Ihe kacha mma Microsoft Xbox Game Pass Ultimate Deals